नेपालको वस्तुस्थितिमा स्वायत्त शासन सबैभन्दा राम्रो हो । -नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ – U News7
नेपालको वस्तुस्थितिमा स्वायत्त शासन सबैभन्दा राम्रो हो । -नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’
December 18, 2016 March 18, 20170Comments
भारतको नयाँदिल्लीमा गरिएको बाह्रबुँदे समझदारीभित्र नेपाल पराजयको जरा भएको दाबी गर्छन् नेकपा माओवादीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ ।
त्यो जरा उखेल्न जनता एकपटक फेरि विद्रोहमा उठ्नुपर्ने परिस्थिति उनले देखेका छन् । आजका घटनाक्रम हेर्दा राजनीतिक शक्ति र नेताहरूले मात्रै होइन, सामान्य नागरिक, कर्मचारी, प्रहरी, सेना र बुद्धिजीवी सबैले बाह्य हस्तक्षेपको अनुभूति गरेको बताउने विप्लवसँग अहिलेको राजनीतिक संकट, संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव, त्यसबारेको विपक्षी आन्दोलन र नेकपा माओवादीको भावी रणनीतिबारे विप्लवसँग चिरञ्जीवी ढुंगाना र रेवती सापकोटाले गरेको अन्तर्वार्ता ।
– के गरिरहेको छ, नेकपा माओवादी यतिबेला ?
– तपाईंहरू संघर्ष, संघर्ष भनिरहनु हुन्छ, अबको संघर्षको स्वरूप सशस्त्र हुन्छ कि शान्तिपूर्ण ?
– त्यसो भए संघर्षको स्वरूप कस्तो हुन्छ ?
– पटकपटकका सशस्त्र र निशस्त्र संघर्षका उपलब्धिलाई केही व्यक्ति र प्रवृत्तिले उपभोग गर्न पाए पनि समग्र जनताले त पाएको देखिँदैन ? फेरि पनि हुने संघर्षलाई हाम्रो समाजले थेग्न सक्ला ?
यो सही कुरा हो, तर त्यो नकारात्मक शिक्षाको रूपमा । समग्रतामा त्यो सही होइन । हरेक संघर्षले सापेक्षित सकारात्मक परिणाम पनि ल्याएको Wholesale NFL Jerseys छ । तर त्यसले आमूल परिवर्तन गर्ने ध्येयलाई भेट्न सकेको छैन । त्यो कुरा साँचो हो । जब विद्रोही नेता वा अगुवाले आन्दोलन निष्कर्षमा पुर्‌याउन सक्दैन तत्पश्चातको परिणाम आउने त्यस्तै हो । यदि आन्दोलन सफलतामा पुगेको भए अहिलेको अवस्था आउँदैनथ्यो, त्यो आन्दोलन पूर्णतामा जान्थ्यो । त्यतिबेलाको आन्दोलनका अगुवा अहिले पछाडि फर्केका छन् । जनअधिकारको संघर्षलाई रोक्न मिल्दैन ।
– ०४६ यताका संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गर्न सहयोग नगरेर फेरि किन संघर्ष गर्नुपर्‌यो ?
– शान्ति-सम्झौता उल्लंघन भएको प्रसंग उठाउनुभयो, बाह्रबुँदे समझदारी गर्नु नै गलत थियो भन्ने हो ?
नेपालको cheap oakleys तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितिमा त्यो सही थियो । दिल्लीमा बाह्रबुँदे समझदारी हुनु राम्रो थिएन । त्यो कुरा हामीले त्यतिबेलै भनेका थियौं । हामीले रोल्पामा पाँचबुँदे सहमति गर्‌यौं । गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग पनि हामीले कुराकानी गरिरहेका थियौं, नेपालभित्रै समझदारी हुनुपर्छ । दिल्लीमा समझदारी गरिएको विषय भएकाले अहिले समीक्षा गर्दा त्यसभित्रै पराजयको जरा देखिन्छ । दलहरूसँग मिलेर आउने राजनीतिक आन्दोलनको हिसाबले गलत थियो भन्ने होइन । घुमाएर जसरी त्यहाँ पुर्‌याई भित्री चाल चालियो, त्यो आजको परिणामको लागि जिम्मेवार छ भन्ने देखियो Cheap Jerseys ।
– भारतको मध्यस्थतामा भएको भनिएको बाह्रबुँदे समझदारी र त्यसले निम्त्याएको परिणामले हाम्रो राष्ट्रियता बलियो देखिन्छ कि कमजोर ?
– संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता भएपछि सत्तापक्षको व्यवहार र प्रतिपक्षको आन्दोलनलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
– भारतले नेपाली राजनीतिमा खेलेको भूमिकालाई के भन्नुहुन्छ ?
– नेकपा माओवादीको चीनसँग कस्तो सम्बन्ध छ ?
– समकालीन राजनीतिमा तपाईंको सहकार्य केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल, मोहन वैद्य, बाबुराम भट्टराई, मोहनविक्रम सिंह कोसँग हुन्छ ?
– कुनैबेला तपाईं र वर्षमान पुन पुष्पकमलका प्रिय पात्र हुनुहुन्थ्यो । अहिले उहाँसँग सम्बन्ध कस्तो छ ?
– तपाईं र बाबुरामबीचको सम्बन्ध व्यक्तिगत रूपमा निकट हो ?
– विभाजित माओवादी आन्दोलनका घटक दलहरूले तपाईंलाई नै नेतृत्व सुम्पन तयार भए माओवादी आन्दोलन पुनः एकताबद्ध हुन सक्छ ?
– वर्गीय मुद्दा छोडेर कम्युनिस्ट पार्टीले जातीय मुद्दा उठाएको पाइएको छ । तपाईंहरूले पहिचानसहितको संघीयता छोडिदिनुभयो । नेपालमा संघीय संरचना जरुरी छैन ?
– त्यसो भए संघीयता अब तपाईंहरूको एजेन्डा रहेन ?
हामीले संघीयताको विरोध गरेका होइनौं, तर नेपालको वस्तुस्थितिमा स्वायत्त jordan sale शासन सबैभन्दा राम्रो हो । नौलो जनवाद र वैज्ञानिक समाजवादभित्र उत्पीडित जातिको स्वायत्त शासन नेपालको लागि उपयुक्त हुन्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो । संघीयतालाई अहिले अर्को ‘अति’ मा लगिएको छ । नेपालको अस्तित्व नै समाप्त गर्ने डिजाइनमा विभिन्न खालका साम्राज्यवादी शक्तिहरूले त्यही अतिमा लैजान खोजेका छन् । यसबाट नेपाल त रहँदैन नै, नेपाली जनताको मुक्ति त झन् टाढाको विषय भइहाल्यो । आदिवासी जनजाति पनि आफैं अर्काको गुलाम र उपनिवेशमा बदलिने राजनीतिमा जानु हुँदैन ।
– तपाईंहरूले चाहेको संरचना कस्तो हो ?
– सरकार एक वर्षभित्र स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव गराउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यतामा छ । माओवादी ती चुनावमा सहभागी हुन्छ ?
– एक वर्षभित्र तीनवटा निर्वाचन नभएको अवस्थामा आउने राजनीतिक परिस्थितिलाई कसरी आकलन गर्नुहुन्छ ?
संसद्वादी नेतृत्व स्वतन्त्र नभई निर्देशित भइदियो । अरूको हस्तक्षेपमा मात्र नभई पालित र पोषितजस्तै देखिन्छ । त्यसैले त्यस्तो नेतृत्वले आजको आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्दैन भन्ने हो । अहिलेको अवस्थालाई सम्बोधन 00:39:23 गर्न सुस्पष्ट दृष्टिकोण भएको व्यवस्था र त्यसलाई नेतृत्व गर्न सक्ने नेता चाहिन्छ । राज्यसत्ताका सम्पूर्ण संरचना परिवर्तन गरी जनताको अधिकारसम्पन्न राज्यसत्ता निर्माण गर्नु आजको ऐतिहासिक आवश्यकता हो । त्यसबारेमा पुष्पकमल र मोहन वैद्य, मोहनविक्रम सिंह र नारायणमान बिजुक्छे रोहितजीहरूले पनि सोच्नुहोला ।
– त्यस्तो राजनीतिक संकट आउने बेलामा शक्तिकेन्द्रहरूले तपाईंहरूलाई पनि उपयोग गर्ने खतराको बारेमा विश्लेषण हुने गर्छ नि ?
– अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिमा कहाँनेर छ नेकपा माओवादीको स्थान ?
– मधेसकेन्द्रित दलले उठाएका मुद्दाले मधेस र मधेसी जनताका समस्या समाधान होला ?
– धार्मिक सहिष्णुता र असहिष्णुताको रूप तपाईंहरूले देखिरहनुभएको छ, नेपालमा धर्म निरपेक्षता रहनुपर्छ कि पर्दैन ?
धर्म मान्नु हुँदैन । धर्म छँदै छैन किन मान्ने ? अबको पुस्तालाई विज्ञान पढाउनुपर्छ, ज्ञानको बाटोमा हिँडाउनुपर्छ । दुनियाँमा हुँदै नभएको झूटो भ्रममा हिँड्न दिनु हुँदैन । अहिलेसम्म दमन गर्नेमध्येको एउटा हतियार धार्मिक हो भनेर जनतलाई अपिल गर्नुपर्छ Fake Oakleys । दमन गर्ने हतियारबाट जनता बाहिर आउनुपर्छ, यो धर्म वा त्यो धर्ममा होइन । धर्म भनेको जनतालाई उत्पीडन गर्ने एउटा हतियार हो र भ्रमजाल हो । भगवान् हुन्छ भने बोक्सी पनि हुन्छ ।
– अमेरिकासहित पश्चिमा मुलुकसँग माओवादीको सम्बन्ध कस्तो छ ?
– भारतसहित विभिन्न मुलुकमा क्रियाशील माओवादी संगठनहरूसँगको सम्बन्ध ?
– राजतन्त्र पुनस्र्थापना हुने आकलन गरिँदैछ नि ?
राजनीतिमा असम्भव केही देखिँदैन । त्यो हुन्छ कि हुँदैन भन्ने नेपालको संकट र यसलाई नेतृत्व गर्ने नेताहरूको क्षमतामा भर पर्छ । संसद्वादी दलको असफलताको कारणले त्यस्तो भएको हो, तर राजतन्त्र पुनस्र्थापना झन् सम्भव छैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ । नेपाललाई वैज्ञानिक र जनवादी व्यवस्थामा लैजानु नै समस्याको समाधान हो । नेपालमा आन्दोलन र निकासको सम्भावना भनेको नौलो जनवाद र वैज्ञानिक समाजवाद मात्रै वस्तुवादी उचित विकल्प हो । – : स्रोत अन्नपूर्ण
← २८ मध्येबाट २ ट्युन छनोट भएको थियो ‘एउटा मान्छेको मायाले …..
कुण्डलिनी शक्ति आदिशक्ति →